Kitra – «Cosafa Cup U17» : resin’i Malawi ny Barea Academy | NewsMada
Kitra – «Cosafa Cup U17» : resin’i Malawi ny Barea Academy
Par Taratra sur 23/07/2016
Ratsy fanombohana ny Barea Academy, teo amin’ny fiadiana ny «Cosafa Cup U17», taranja baolina kitra. Lavon’i Malawi mantsy ny Malagasy, teo amin’ny lalao voalohany, amin’ity fifaninanana ity.
Niondrika teo anatrehan’i Malawi, tamin’ny isa tery 2 noho 1, ny Barea Academy, omaly teo amin’ny andro voalohany, amin’ny «Cosafa Cup 2016», sokajy U17. Fihaonana, natao omaly zoma, tao amin’ny kianja St François Xavier, Port Louis – n’i Maorisy. Azo lazaina fa tratry ny tsy nampoizina ihany ny Malagasy, tamin’ity lalao ity, satria efa tany amin’ny fiafaran’ny fotoana, teo amin’ny faha-89 mn, nilalaovana no nahatafiditra ny baolina nampiondrika ny Malagasy ry zareo Malaoita.
Raha ny fizotran’ny lalao, ny Malagasy, no nampiditra ny baolina voalohany, teo amin’ny minitra faha-32, tamin’ny alalan’i Fabrizio Mosa. Baolina votsotra teo amin’ireo vodilaharana Malaoita, no notsoriahin’i Fabrizio, izay nandaka izany tany anaty harato.
Namaly bontana avy eo ny Malaoita, taorian’io. Nisesy ny fanafihana ary nisy baolina saika matin’i Raphael Banda, saingy tratry ny “hors-jeu”, izy. Io isa tokana 1 noho 0 io, nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nanasahala ny isa ry zareo Malaoita, vao nanomboka 5 mn monja, ny fizaram-potoana faharoa. Nahafaty baolina tamin’ny lohany, Raphael Banda, rehefa nanao fahadisoana teo amin’ny fandraisana baolina i Balvano, mpiandry tsatobin’ny Barea.
Taorian’io, nilalao 10, Malawi, teo amin’ny minitra faha-67, rehefa nahazo karatra mavo fanindroany, Chimaya. Na teo aza izany, tsy hain’ny Barea ny nanararaotra io tsy fahampiana io. Ry zareo Malaoita, indray no mbola nahatafiditra ny baolina faharoa, 1 mn tsy hiravana, tamin’ny alalan’i Franck.